नेकपाका सांसदले भने- बालुवाटारको जग्गा हाकाहाकी आफ्नो नाममा राख्‍नेलाई कारबाही होस्- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र सरकारी जग्गा आफ्‍नो नाममा राख्‍नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारी स्वामित्वको जग्गा आफ्‍नो नाममा राख्‍नेलाई अदालत र अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'नेपालको केन्द्र काठमाडौं, काठमाडौंको पनि केन्द्र बालुवाटारजस्तो ठाउँको सरकारी स्वामित्वको जग्गा हाकाहाकी आख्‍ने स्वामित्वमा पार्ने हर्कत गर्ने हरेकलाई अख्तियार र अदालतले कारबाही गरोस्,' उनले भने ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्‍नो नाममा राख्‍ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले फिर्ता गरेका छन् । जग्गा फिर्ता नगर्ने र सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्‍न तत्कालीन तीन मन्‍त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भट्टराईले अगाडि भने, 'देशभरका अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा खोजबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारले यथाशीघ्र कदम अगाडि बढाओस् ।'
नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डेले पनि ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई छोड्‍न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, 'ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी कोही नछुट्‍ने र निर्दोष कोही नपर्ने गरी न्याय निरुपण गर्न अदालतलाई सफलता मिलोस् ।'
सांसद पाण्डेले तारागाउँको जग्गा, वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पनि माग गरिन् ।
सरकार र नेकपा नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको सरकारी जग्गा न्यून मूल्यमा लिएको आरोप लागेको यति समूहको बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्न पनि सांसद पाण्डेले सरकारसँग माग गरिन् ।
नेकपाकै सांसद विद्या भट्टराईले विश्वमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको सन्दर्भमा विमानस्थलमा राखिएको स्क्यानिङ मेसिनबाट हुने जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न र विश्‍वभरी नै नेपालमा कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने सन्देश दिन विमानस्थलमा हुने जाँचर्लाइ कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारले तयारी गरिरहेको र सबैले यो विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
सांसद विमला विश्वकर्माले काभ्रेका अजित मिजारको परिवारले ४ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन् । मिजारको शव ४ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो कुनै द्वन्द्‍वकालीन मुद्दा नभएर अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या भएको र घटनाको विषयमा चित्तबुझ्दो अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै पीडितलाई १० लाख दिन खोजिएको बताइन् । उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य जाँच गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
सांसद विष्णु शर्माले छाउगोठ भत्काउने अभियान सरकारले सुरु गर्नु राम्रो भए पनि त्यसो गर्दैमा कुरीति नहट्‌ने भएकाले जनचेतनामूलक अभियान चलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद शशी श्रेष्ठले महिला आयोग साढे चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
सांसद शान्ता चौधरीले सिंहदरबार प्रवेश गर्न लामो समय कुरेर पास लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरिन् । उनले निश्चित समय छुट्याएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद कर्णको प्रश्‍न : भैँसीको नागरिकता हुँदैन, नेपालभित्र आइसकेपछि इन्डियन भन्‍ने ?
नेकपा सांसदको माग- 'विदेश गएकाको परिवार बिगार्नेलाई कडा कारबाही होस्'
गुम्बागाउँका बिरामीको जाँच गरेर तत्‍काल सत्य-तथ्य बाहिर ल्याइयोस् : सांसद तामाङ
प्रकाशित : माघ २९, २०७६ १५:१७
काठमाडौँ — राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले ठूला व्यवसायीलाई छुट दिएर सीमा क्षेत्रमा भैँसी व्यवसायीलाई दु:ख दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बुधबारको बैठकमा सांसद कर्णले दुई/चार लाखको काम गर्नेलाई कारबाही गरेर सरकारले सम्पूर्ण कुरा सिध्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । '२/४ लाखको काम गर्ने साना व्यापारीलाई मार्ने काम नहोस् । यसले सरकारको बदनामी हुन्छ', उनले भने, 'करोडौंको माल ल्याउने व्यक्तिले छुट पाउने र दुई/चार लाखको काम गर्नेलाई कारबाही गरेर सम्पूर्ण कुरा सिध्याइदिन खोजिएको हो ? दुवै मन्‍त्रीले यहाँ (संसद्‍) मा जवाफ दिनु पर्‍यो ।' सांसद कर्णले यस विषयमा गृहमन्‍त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बाराको जितपुर बजार भैँसी सप्लायर्स हुने देशकै ठूलो बजार भएको उल्लेख गर्दै सांसद कर्णले वीरगन्जबाट राजधानीतर्फ लान खोज्दा प्रहरीले समाएर भन्सारमा बुझाइदिने गरेको बताए । 'सबैलाई थाहा छ बाराको जितपुर नेपालकै ठूलो भैँसी बजार । त्यहींबाट देशभर भैँसी सप्लायर्स हुन्छ । पशु क्‍वारेन्टाइनको व्यवस्था कहीं पनि छैन । उनीहरु (व्यापारी) ले त्यहींको पशु चिकित्सालयसँग लेखाएर लान्छ स्वस्थ हो भनेर,' सांसद कर्णले भने, 'विरगन्जदेखि माथि जान्छ र प्रहरीले समाएर भन्सारमा बुझाइदिन्छ । यस किसिमको राज्यको व्यवहारबाट नागरिक त्रसित छ ।'
जितपुर बजारबाट ल्याएको भैँसीलाई भारतीय भनेर व्यापारीलाई दु:ख दिने गरेकोमा सांसद कर्णको आपत्ति छ । 'सभामुख महोदय भैँसीको नागरिकता हुँदैन, भएदेखि देखाइदिन्थे,' उनको प्रश्‍न थियो, 'इन्डियन भैँसी ल्याएर आयो भन्‍ने प्रमाण के त ? इन्डियन भैँसी ल्याएर आको हो भने बोर्डरमा समात । नेपालभित्र आइसकेपछि यो इन्डियन भैँसी हो भन्‍ने ? अनि भन्सारमा बुझाउने ? यस किसिमबाट नागरिक त्रसित छन् । यसो नगर्न म अनुरोध गर्छु ।'
कर्णले नेपाल भित्रिने करोडौंको ल्वाङ, मरिच, केराउ दाना, छोकडालगायतमा पनि सरकारले कडाई गर्दा सीमा क्षेत्रको बजार ठप्प भएको बताए । उनले सीमा क्षेत्रको २५ किलोमिटर भित्र पुगेपछि प्रहरीले समाए पनि मुचुल्का बनाउँदा बोर्डरमै समाएको भनेर बनाइ राज्यले झुठो बोलिरहेकोमा आपत्ति जनाए । सीमा क्षेत्रमा व्यापारीलाई समाएर कमिसनको खेल भइरहेको सांसद कर्णको आरोप थियो ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७६ १४:३४